प्रधानमन्त्रि देउवाले आजै सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने , क–कसले सपथ लिँदैछन् ? | Seto Khabar
प्रधानमन्त्रि देउवाले आजै सानो मन्त्रिमण्डल बनाउने , क–कसले सपथ लिँदैछन् ?
जेठ २४, काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज अपरान्ह पद तथा गोपनीयताको सपथ लिने भएका छन्। । शितलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नब निर्वाचित प्रधानमन्त्रिलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउनेछिन्।
मंगलबार संसदको झण्डै दुई तिहाई मत पाएर नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए। देउवासँगै आज सानो मन्त्रिमण्डल गठन हुने र नवगठित मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरुले पनि पद तथा गोपनियताको सपथ लिनेछन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आज सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारीसमेत गर्नुभएको छ । सम्भवतः कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट तीन –तीन मन्त्रीले सपथ लिनुहेनेछ भने फोरम लोकतान्त्रिकबाट विजय गच्छदारले सपथ लिनुहुनेछ ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रीको नाम टुंगो लागिसकेको नभए पनि स्रोतका अनुसार कांग्रेसबाट गोपालमान श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र फरमुल्ला मन्सुरले सपथ लिन सक्ने सम्भावना छ भने माओवाबीबाट मन्त्रीको नाम आज बिहान बस्ने पार्टी बैठकले टुंगो लगाउने छ ।
देउवाको सपथ ग्रहणको साइत अपरान्ह १ बजेर ५७ मिनेटका लागि तय भएको देउवा निकट स्रोतले बतायो। पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीसँगै ७ मन्त्रीहरुले सपथ लिएपछि सरकार क्रमश ; बिस्तार हुँदै जानेछ। आफू र आफ्नो मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुले पद तथा गोपनियताको सपथ लिए लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा पदभार सम्हाल्न सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानेछन्।